हाम्रो सपना आर्थरलाई अमेरिकन आइडलमा बिजयी देख्ने ! – Dhruva's Creations
By Dhruva's Creations on 05/16/2020
हालै मेरो एउटा लेख brtnepal .com मा प्रकासित भएको थियो जसको एउटा अंश यहाँ प्रस्तुत गरेको छु . आज हुने अमेरिकन आइडलको ग्रान्डफिनालेमा दिबेस पोखरेललाई विजय बनाउनहामी सबै एक जुट हौ। एउटा सपना जुन हामी सबै मिलि पुरा गर्न सक्छौ। आउनुहोस यो कार्यमा तपाइँ हामी एक जुट हौ र एउटा नया ईतिहास लेखौ।
………… अचानक मेरो दिमागमा एउटा कुरा फुर्‍यो म जस्तो जाबो एक जना साधारण मान्छेलाई यति धेरै जन्मदिनको शुभकामना यो फेसबुकको कारणले आउँछ भने, हामी अनलाइन भोट हालेर प्रशान्त तामाङ, सुशान्त खत्री र तेरिया मगरलाई भारतीय टेलिभिजनको विजेता बनाउन सक्छौ भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सी एन एन हिरोको रूपमा अनुराधा कोइराला र पुष्पा बस्नेतलाई विजेताको रूपमा देखि सकेका छौ । यो हामी सबैको लागि गर्वको विषय हो । यसपल्ट फेरी अर्को अवसर आएको छ । अहिले हाम्रै भोटले टप ७ मा पुगेका अमेरिकन आइडलका हाम्रै नेपाली छोरो “आर्थर गन” अर्थात् दिबेस पोख्रेललाई अत्यधिक भोट दिएर अमेरिकन आइडलको ताज पहिराउन लागि पर्ने हो कि ? यदि त्यसो गर्न सके हामी कोरोना भाइरसको कारण अहिले क्वारेन्टाइनमा बसेको पनि सदुपयोग हुने र एउटा नयाँ इतिहास पनि रचिने छ । फेसबुकमा उसको पेज नै हेर्ने हो भने पनि एउटा फ्यान पेजमा ४५,००० भन्दा धेरै फ्यान रहेको छ भने त्यस्ता थुप्रै फ्यानहरूले उसको नाममा फेसबुक पेज बनाएर सहयोग गरी रहेका छन् । जुन दिन प्रतिदिन बढी रहेको छ । र हरेकले एकपल्टमा ३० पल्ट सम्म भोट हाल्न मिल्नेछ । हामी सब एक जुट हौ । र एउटा नयाँ रेकर्ड कायम गरौँ । हाम्रो भोटले नै जिताउने छ अमेरिकन आइडलका विजेतालाई पनि ।
अमेरिकन आइडलका निर्णायकहरुले (judges) समेत निक्कै राम्रो र प्रशंसनीय टिप्पणीहरू दिँदै आएका छन् दिबेस पोख्रेल अर्थात् आर्थर गनलाई । हालै भएको राउन्डमा समेत उसको राम्रो प्रशंसा गरिएको छ । त्यसैले उनी एक सफल र विजेता हुने लायकको कलाकार समेत भएको हुँदा र हाम्रो सानो प्रयासले नयाँ कीर्तिमान बन्छ भने हामी किन पछि पर्ने ?
टप टेनको प्रस्तुति पति निर्णायकगणले दिएको टिप्पणी यस प्रकार छ । जसमा क्याटीले उ आराम र शान्त देखिन्थे र श्रोता र क्यामेरामा दर्शकलाई आरार्सित गर्न सफल थिए । त्यसै गरी ल्यूकले भनेका थिए कि उ एक धेरै नरम/कम बोल्ने मान्छेबाट एक सम्भावित विशाल रेकर्डिङ कलाकारको रूपमा देख्न पाउँदा रमाइलो लागेको छ । लियोनेलले त झन् उसको तारिफ गर्दै भने कि उसले जुन गीत गाउँदछ त्यसमा आर्थर गन को स्ट्याम्प लाग्छ, र त्यो शैली र पहिचान हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्छन् । अहिले उनी टप ७ मा पुगी सकेका छन् र अहिले उसको लागि दिनु पर्ने भोटिङ लाइन यस सप्ताहको लागि बन्द भई सकेको छ । अब मात्र एक सप्ताह छ ग्रान्ड फिनालेको लागि जसमा एउटा नयाँ किर्तिमानतय हुनेछ, र यो एउटा अवसर हो हामी सबैको लागि कि पहिलो पल्ट एउटा नेपाली छोरोलाई विश्वको सबै भन्दा ठुलो रियालिटी सो को विजेता बनाउने । जुन हामी सबैको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण घडी हो । आउनु होस् हामी सब मिली यो एउटा इतिहास कायम गरौँ । यसले हाम्रै जित हुनेछ र अमेरिका र विश्वले पनि नेपाल सगरमाथा र बुद्धको देश मात्र नभएर कला र सङ्गीतको देश पनि हो भनेर चिन्ने छन् ।
मे ११ कै दिन आर्थरले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन् कि यो उसको जीवनको एकदम आनन्दित क्षण थियो। उसले लेखेका छन् ,” मेरो प्यारी आमा र तपाईं सबै बिसेष मान्छेको लागि गाउन पाए । यस महान अवसरको लागि @americanidol लाई धन्यबाद दिन चाहन्छु । म बोन इभर द्वारा “हे मा” गीत गाउन पाएकोमा खुशी छु। यस मार्फत मलाई मतदान गरेकोमा तपाईंहरू सबैलाई धन्यवाद। म तपाईंले खर्च गरेको सबै समय, ऊर्जा को हृदयबाट सराहना गर्दछु, म सबै को लागि आभारी छु।” उनले अझ लेखेका छन् ” फेरी एक पटक, शीर्ष7मा छनौट हुनेगरी मलाई मतदान गर्नु हुने तपाइँ सबैलाई धन्यवाद। शान्ति र प्रेम !!! स – सम्मान, दिवेश पोखरेल (आर्थर गन)! त्यसै गरि अहिले अनलाइन र सोसियल मिडियामा हेर्ने हो भने धेरै भन्दा धेरै उनका फ्यानहरुले भोट गर्न अपिल गरि रहेका छन्। मैले अनलाइन मार्फत
नजिकबाट यस पल्टको अमेरिकन आइडल हेरी रहेको छु। त्यसै गरि यहाँ नेपाल स्थित अमेरिकन दुताबासले समेत उनको प्रशंसा गर्दे सेर गरेको एउटा
फेसबुक क्लिप यहाँ सेर गरेको छु। अब मात्र दुई दिन छ हामीले अमेरिकन आइडल पाउनेछौ र सम्भवत पहिले नेपाली छोरोलाई तपाइँ हाम्रै भोटले यो
ताज पहिराउन सक्ने छौ। आउनुहोस एक पल्ट सबै मिलि यस कार्यमा साथ् दिउ।
सिधा कुरा जनता संग को कार्यक्रममा आर्थरले झलकमान गन्धर्व को एकदमै लोकप्रिय गीत समेत गाएर सबैलाई वोट गर्न अपिल समेत गरेका छन्।
त्यसै गरि US Embassy , Nepalले समेत यस्तो अपिल गरेको छ।
Tagged as: American Idol 2020, Arthur Gunn, Dibesh Pokhrel, Top5Arthur